Kooxaha Chelsea, Tottenham iyo Arsenal oo ku loolamaya macalinka ugu Sigaar cabista badan Serie A - Jubbaland TV
Kooxaha Chelsea, Tottenham iyo Arsenal oo ku loolamaya macalinka ugu Sigaar cabista badan Serie A
By admin April 28, 2018 351
Kooxda Kubada Cagta ee Arsenal ayaa kusoo biirtay raacdada loogu jiro Hogaamiyaha Kooxda Napoli Maurizio Sarri, sida ay sheegayaan Wararka ka imaanaya magaalada London.
Kooxaha kasoo jeeda Waqoyiga iyo galbeedka Magaalada London ee Chelsea, Tottenham Hotspur iyo Arsenal ayaa dhamaantood ku loolamaya saxiixa macalinka kooxda Partenopei Maurizio Sarri, kaddib markii wakiilkiisa lagu arkay London.
Sida uu ku waramayo Hilinka Rai Sport’ Gunners ayaa rabta in ay bedel uga dhigto Hogaamiyaheeda Arsene Wenger, kaas oo dhamaadka ololahan ka tagi doona Kooxdiisa, kaddib 22-sano uu maamule u ahaa, Xilli sidoo kale liiskaan uu kasoo muuqday hogaamiyaha dibad jooga ee Luis Enrique.
Chelsea ayaa dooneyso in sarre ay bedel uga dhigto Antonio Conte, kaas oo aan la hubin mustaqbalkiisa Bridge, halka Mauricio Pochettino uu dhawaan si maldahan u sheegay in uu ka tagi doono Spurs, kaddib markii uu lumiyay tartanka FA Cup-ka.
Si kastaba ha ahaatee’ Sarri ayaa raadinaya ku guulaysiga Marada Scudetto, xilli ay Kooxdiisa hal dhibic ka hooseyso Juventus, ka hor inta aysan ku wada Ciyaarin Allianz Stadium toddobaadkii hore, xilli dulaalkiisa uu kulan la qaadan doono madaxweyne Aurelio De Laurentiis, kaddib markii dib loo dhigay wadahadalo sare loogu qaadaayo qandaraaskiisa, xilli la sheegayo in hishiiskiisa Stadio San Paolo lagu burburin karo aduun dhan €8m.
The post Kooxaha Chelsea, Tottenham iyo Arsenal oo ku loolamaya macalinka ugu Sigaar cabista badan Serie A appeared first on Wararka Ciyaaraha.
Antonio Conte oo fahamsan sababta Chelsea u iibsay Mohamed Salah
Juventus oo wayn doonta Xiddigo muhiim ah, ka hor kulanka Derby d’Italia
Real Madrid Oo Man United Ka Diiday Saxiixyo Ay Ka Rabtay Kooxda
Daawo Sawirrada Kooxda Juventus, kuwii shirka Jaraaid, garoonka iyo Diyaarada